Ny famangiana isan-divay ny faritra any Eoropa dia nofy isaky ny divay connoisseur. Dia manapariaka tanim-boaloboka mahafinaritra, mafana sy talaky masoandro Weather, ny hilaza tehezan-kavoana, sady tsara sakafo hamaritra ireo faritra divay ambony. Raha mpitia divay ianao ary te hahita ireo orinasa mpamokatra divay tsara indrindra any Eropa sy ny fomba ahatongavana any, Save A Train dia hanampy anao hahazo any!
Vakio ny hahafantatra izay Eoropa no mba hanolotra divay tia. Miloka izahay fa efa nofonosinao ao an-tsainao alohan'ny hamaranana an'ity lahatsoratra ity!
Ny Rhone-Dohasaha divay faritra dia be ny tolotra avy amin'ny ara-kolontsaina fomba fijery amin'ny Lyon maha-iray ny UNESCO Lova iraisam-pirenena Toerana. Miaraka amin'ny simple, marina gastronomy, Ny Rhône dia ny any an-danitra tia divay sy ny malaza divay ny Crozes-Hermitage, Cote-Rotie, ary Chatea malalakaf-du-Pape manao mpizahatany divay erak'izao tontolo izao.
Ny Tuscany wineries manolotra ny tonga lafatra divay firenena traikefa. Tsy ny Tuscany ihany no misy ao anatiny Italia fangatahana malaza indrindra, toy ny vaovao Val d'Orcia DOC, Vino Nobile de Montepulciano, fa ny faritra koa dia mirehareha amin'ny avonavona, fitiavana ny tany, sy fifaliana be ny mizara izany amin'ny hafa.
Ny fianakaviana mamokatra fotsiny Riesling an- 4.2 hektara ny tany izay mampiavaka ny tonga lafatra mandanjalanja eo amin'ny asidra sy ny rafitra. Ny divay be mpitsikera dia zaraina erak'izao tontolo izao. Raha te-hanandrana ny divay-toerana, aza hadinoina ny boky fotoana mialoha.
The voalohany ny masonao hapetrako eo ambonin'ny-tanan-tohatra ny hantsana, ianao namely ny impracticality izany rehetra. (Indrindra fa hamoaka vitsivitsy sy divay eran'ny tavoara). Eken'ny UNESCO ho toy ny World Heritage Site, ity lafiny voatsodrano amin'ny masoandro ao amin'ny Lake Genève ity dia mitaingina lavarangana feno balkon feno voninkazo, shimmering rano manga izay mety ho tanteraka ihany koa amin'ny vera Chasselas an-toerana. Toy izany koa, ny farihy-namihina ny teti-dratsin'ny soar teo tafahoatra slants izay osy sy ekipan'ny tendrombohitra ihany no tokony hijinja.
Ny tanànan'i Lausanne tonga lafatra iray toerana amin'ny faran'ny Lavaux. Mahatonga toerana tsara ho an'ny trandrahana ny faritra. Ao anatin'ny Soisa, Lausanne, raha ny marina ny maro an'isa tompony rehefa tanim-boaloboka. (Manana faritra itoboan-divay ny Kaominina tsy kely noho izy 62 baolina kitra saha, mamokatra hatramin'ny 400’000 tavoahangy isan-taona.)
Indray ny kitapo ary hasaina ny fitaratra. Fotoana izao hisamborana lamasinina iray na roa hijerena ireo orinasa mpamokatra divay tsara indrindra any Eropa. Save A Train hanome anao tapakila haingana sy tsy misy olana tsy misy sarany miafina. Inona no miandry? Fotoana haka ny divay, amin'ny!
Tianao ve mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy Tsara indrindra Wineries ny Ao Eoropa Sy Ny Fomba Hahazoana Misy tao an-toerana? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome voninahitra fotsiny amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-wineries-europe%2F%3Flang%3Dmg- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)